Ha’ayadaha gargaarka ee QM ayaa sheegay in shan milyan oo qof oo Soomaali ah, aanay haysan cunto ku filan, waxaana sabab u ah roob yarida iyo jiritaan la’aanta dalaga beeraha iyo xoolo badan oo naf-baxay.
Shukri Axmed oo ka tirsan hay’adda cunada iyo beeraha ee Qaramada Midoobay ee FAO, ayaa u sheegtay wakaalada wararka Reuters in loo baahanyahay in isla imika tallaabo degdeg ah la qaado.
Shukri Ahmed ayaa tilmaantay in sanadkii 2011-kii ay macaluushu timid kadib markii aan wax ka hortag ah la samaynin.
Waxaana arrintaasi cirka ku sii shareeray, al-Shabaab oo mamnuucay in wax gargaar ah la gaarsiiyo goobihii ay ka talinayeen.
Ciidamada Midawga Africa ee AMISOM iyo ciidanka Somalia ayaa al-Shabaab ka saaray deegaanadii ugu weynaaa ee ay ay haysteen inkasta oo wali ay ku loolamayaan goobaha durugsan.